मोदीलाई मुस्ताङ जान चुनौती, मुस्ताङमा भारी हिमपात - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
मोदीलाई मुस्ताङ जान चुनौती, मुस्ताङमा भारी हिमपात
Published On : २७ बैशाख २०७५, बिहीबार १४:४०
उपल्लो मुस्ताङमा बुधबार रातिबाट हिमपात भएको छ । साँझदेखि परेको भारी बर्षातसँगै बाह्गाउँ मुक्तिक्षेत्र, दालोमे र लोमान्थाङ गाउँपालिकामा हिमपात भएको हो । वैशाख महिनामा यसरी हिउँ परेको पटक रहेको स्थानीयबासी बताउँछन् ।
रातिदेखि परेको हिमपात केही स्थानमा आधा फिटसम्म जमेको छ । हिमापतका कारण बेनी-जोमसोम-कोरला सडक योजनाको काम पनि प्रभावित भएको छ । त्यसैगरी सदरमुकाम जोमसोमबाट उपल्लो मुस्ताङ जाने सडकको यातायात पनि हिमापतले प्रभावित भएको छ।
बेमौसमी हिमपातले कृषकहरुलाई भने चिन्तित बनाएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार मुक्तिनाथको दर्शन गर्दैछन् । जहाँ आधा फिटसम्म हिउँ जमेको स्थानीयबासी बताउँछन् ।
राति परेको हिउँ बिहीबार दिउँसोबाट रोकिएको छ । हिमपात रोकिएकाले मोदीको मु्क्तिनाथ भ्रमणको तयारीलाई तीब्र पारिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ ।
जिल्ला सुरक्षा समितिले मुस्ताङको सुरक्षा कडा बनाएको छ । मुक्तिनाथ क्षेत्रलाई पनि सफा बनाइसकिएको छ । सुरक्षाकर्मीले हिमपात र वर्षाले रोकिएका सडक खुलाउने प्रयास थालेका छन् ।
मोदी आउने भएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिले थोरङ्ला पास नाका बन्द गरेको छ । त्यसैगरी हेलिकोप्टर र गाडीबा मुक्तिनाथ आउने पर्यटकलाई पनि दुई दिन रवक लगाइएको छ।